Kenya oo qiil u yeeshay mudada lagu kordhiyay go’doomintii Islii | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Kenya oo qiil u yeeshay mudada lagu kordhiyay go’doomintii Islii
Kenya oo qiil u yeeshay mudada lagu kordhiyay go’doomintii Islii
Xilli Soomaalida ku dhaqan xaafadda Islii ee Magaalada Nairobi ay suggayeen in go’doominta laga saaro xaafadaasi ayaa waxaa Dowladda Kenya ka soo yeeray war walwal ku abuuray.
Ujeedada laga lahaa go’doominta ayaa ahayd in lagu xakameeyo faafitaanka xanuunka COVID-19, ka gadaal markii ay Kenya sheegtay in dad badan oo Islii degan laga helay xanuunkaasi.
Wasiirka Caafimaadka Kenya ayaa sheegay in Islii ay xaaladda go’doominta ku sii jiri doonto, illaama laga gaarayo 6-da bisha soo socota ee June, sababo ku aadan Kenya oo tallaabadaasi u aragtay mid aan looga maarmi karin xakameynta COVID-19.
Go’doomintan ayaa ah inaanay cidina geli karin, kana bixi karin xaafadda Soomaalida Nairobi ku badan tahay ee Islii, waxaana go’doominta la kordhiyay, xilli ay Soomaalida isu diyaarineysay munaasabadda Ciidul Fitriga.
Mutahi Kagwe, Wasiirka Caafimaadka Kenya ayaa tani ku macneeyay, mid qayb ka ah dadaalada ay Xukuumadda Nairobi kaga hortageyso faafitaanka xanuunsidaha COVID-19, ee uu keeno Coronavirus.
Soomaalida Islii oo qaarkood la hadlay Warbaahinta ayaa walaac xoogan ka muujiyay mudada lagu kordhiyay xaaladdii gooni-yeelka ahayd ee markii hore la geliyay xaafadaasi.